HANDBALL – FIFANINANAM-PIRENENA :: Naongan’ny Cosfa sy THBC ireo tompondaka farany • AoRaha
HANDBALL – FIFANINANAM-PIRENENA Naongan’ny Cosfa sy THBC ireo tompondaka farany
Tahaka ny tany amin’ny taranja basket-ball, sokajy N1A dia resy teo amin’ny famaranana avokoa ireo ekipa tompondaka farany, nandritra ny fifaninanam-pirenena ho an’ny taranja handball, notanterahina tany Mahajanga, tamin’iny herinandro iny. Niondrika teo anatrehan’ny ekipan’ny Tana Handball Club Analamanga (THBC), tamin’ny alalan’
ny isa 22 noho 16, ny ekipan’ ny AS Tsiky Boeny, teo amin’ ny sokajy vehivavy. Ity farany no voahosotra ho tompondaka tamin’ny taona 2017.
Anaram-boninahitra fahenina ho an’ny THBC izany. Toy izany ihany koa ny teo amin’ny sokajy lehilahy, lavon’ny Cosfa tamin’ny alalan’ny isa 20 noho 19 ihany koa ny ekipan’ny AS Saint-Michel, tompondaka farany.
Na izany aza anefa dia samy hisolo tena an’i Madagasikara amin’ny fiadiana ny amboaran’ny rano­masimbe Indianina, izay hotanterahina eto amintsika amin’ny 23 novambra hatramin’ny 2 desambra ho avy izao, ireo klioba efatra ireo. Hifaninana amin’ireo ekipan’i La Réunion (roa lahy sy roa vavy), Mayotte sy Seychelles ary Maorisy izy ireo amin’izany. Hahatratra efatra ambin’ny folo ny isan’ ireo klioba handray anjara amin’izany fifaninanana iraisam-pirenena izany.
Can 2019 Hotsaraina teratany Toniziana ny lalaon’ny Barea sy Sénégal
BAOLINA KITRA – «CAN 2019» :: Mety hasolo an’i Jerôme Mombris i Mamy Gervais sy Jeremy Morel
HAIADY BOXE CHINOISE :: Niakaran’i Jean Christian fanintsiviny ny tendron’izao tontolo izao